Basikety – “Afroleague”: miray vondrona amin’ny ekipan’i Angola ny CosPN | NewsMada
Basikety – “Afroleague”: miray vondrona amin’ny ekipan’i Angola ny CosPN
Vita ny faran’ny herinandro teo ny fisarihana ireo ekipa isam-bondrona hiatrika ny lalao eo anivon’ny FIBA, antsoina hoe “Afroleague”. Fifaninanana andiany voalohany izay handraisan’ny ekipa malagasy, CosPN anjara. Araka ny valin’ny fisarihana, ao amin’ny vondrona D no misy an’i Madagasikara. Ho mafy ny adin’ny CosPN mandritra ity fifaninanana ity satria ekipa kalaza sy efa ambony traikefa no miray vondrona aminy. Anisan’izany ny ekipan’i Angola, Petro de Luanda. Ny ekipan’i Mazembe (Congo), ny Smouha (Egypte) kosa no ekipa 2 hafa manampy an’i Madagasikara sy i Angola ao anatin’ity vondrona D, amin’ny fifaninanana “Afroleague” ity.
Somary nisy fiovana ny teo amin’ny fandaharan-dalao raha ny loharanom-baovao satria raha tokony hanomboka ny faran’ity volana ity izany, dia nihemotra ho amin’ny fiatombohan’ny volana febroary indray izany. Hiatrika ny lalao voalohany amin’izany ny vondrona C, manomboka ny 8 febroary izao, any Ejypta.
Raha tsiahivina, ny CosPN no solontena malagasy voalohany hiatrika ity lalao “Afroleague” ity, amin’ny maha andiany voalohany azy, rehefa avy nibata ny fandresena nanoloana ny ekipan’ny Premium Cobras avy any Seychelles, nandritra ny lalao fiadiana ny amboaran’ny klioba tompondaka eo anivon’ny ranomasimbe Indiana. Tamin’izany no nahavoatsonga azy ho solontena aty amin’ny Zone 7.